ကျွန်တော်နှင့် ဘာသာမဲ့ စာစဉ် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကျွန်တော်နှင့် ဘာသာမဲ့ စာစဉ် (၂)
ကျွန်တော်နှင့် ဘာသာမဲ့ စာစဉ် (၂)
Posted by koyo on Jul 28, 2011 in Buddhism, Critic |6comments
ဘာသာမဲ့ဆိုသော စကားလုံးကို အတော်ကြီးမကျေမနပ်ဖြစ်နေကြဟန် တူပါသည်။ မိမိက သူတစ်ပါးအား စကားပြောဆိုရာတွင်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါး၏ ပြောဆိုစကားကို မိမိက နားထောင်သောအခါတွင်ဖြစ်စေ ထိုစကား၏ဆိုလို ချက်ကို မိမိရရဆင်ခြင်တတ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီး အဓိ ပ္ပါယ်မဖွင့်မိစေဖို့လိုပါသည်။ ကျွန်တော်သည် လူတတ်ကြီးလုပ်၍ ဆရာလုပ် နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောဆိုသမျှ စကားတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူ သားအသီးသီးတို့အား ရည်ညွှန်း၍ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်ဘာ သာဝင်ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုခြင်း အလျှင်းမရှိပါ။
အားပါ၍ မကျေပျက်သော စကားတစ်ခွန်းသည် လူတစ်ယောက်၏ ဘ ၀ကို များစွာပြောင်းလွဲစေပါသည်။ မိမိကိုယ်မှလွဲပြီး တစ်ခြားအားကိုးစရာတို့ အား လိုက်လံရှာဖွေနေစရာမလိုတော့သည်အထိ ပြောင်းလွဲစေပါသည်။ ပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အားသာ အားကိုးနေခြင်းသည် ကလေးအရွယ် လူမ မယ်ဆန်လွန်းလှပါသည်။ ထိုကဲ့သို့အားကိုးနေသမျှကာလပတ်လုံး မိမိကိုယ် မိမိ အားကိုးတတ်သောလူတစ်ယောက် ဖြစ်လာတော့မည်မဟုတ်ပေ။
ဘဟာအီသာသနာအကြောင်းကို ဂဃနဏ မလေ့လာဖူးသည်ကိုကား ၀န်ခံပါ၏။ သို့သော် ဤသာသနာဝင်တို့သည် စည်းကမ်းချက်များကိုထုတ်ပြန် ပြီး ထိုစည်းကမ်းတို့ကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြသူများဖြစ်ကြသည်ဟူ၍ကား အ ကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် နားလည်ထားပါသည်။ တကယ်တော့ စည်းကမ်းဆိုသည် မှာ ဗုဒ္ဓ၏အလိုအားဖြင့် တရားကိုယ်ကောက်မည်ဆိုလျှင် သီလ ကိုသာ ကောက်ယူရပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဘဟာအီသာသနာဝင်တို့သည် သီလ များကိုဖြည့်ကျင့်နေကြသူများဖြစ်နေသည်မှာ ယုံမှားစရာရှိမည်မထင်ပါ။
လူသားတို့အား အမှန်တကယ် စိတ်ပျက်၊ ငြီးငွေ့ပြီး လူ့ဘ၀၌ မပျော် မ ရွှင်ဖြစ်နေစေသည်မှာ စည်းကမ်း(သီလ) ပျက်ခြင်းတို့ကိုသာ ဖြစ်ပါသည်။ မိ မိ စိတ်ပျက်သောအကြောင်းအခြင်းအရာတို့ကို သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့် မယ်ဆိုရင် သိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲ ဟိုလူ့အပြစ်တင် သည်လူ့အပြစ် တင် လုပ်နေကြမယ်ဆိုရင် လူသားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အလှမ်းဝေးနေအုံးမှာ ပါပဲ။ မိသားစု တစ်စုမှာ စည်းကမ်း (သီလ)တွေကို ချိုးဖောက်နေသူ တစ် ယောက်ပါနေမည်ဆိုလျှင် ထိုမိသားစုဝင်များသည် ဘယ်လိုမှ ငြိမ်းချမ်းနိုင် တော့မည်မဟုတ်ပေ။ မိသားစုဆိုသည်မှာ အဖေတစ်ဦးတည်းပိုင်သော အစု အဖွဲ့မဟုတ်ရပါ။ အမေတစ်ဦးတည်းပိုင်သော အစုအဖွဲ့လည်းမဟုတ်သလို အစ်ကို၊ အမ၊ ညီ၊ ညီမတို့ ပိုင်သော အစုအဖွဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ မိသားစုဝင်တိုင်းမှာ စည်းကမ်း(သီလ)တွေ ရှိကြပါတယ်။ အဖေ့မှာလည်း မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်း၊ အမေ့မှာလည်း မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းကမ်း၊ သားသမီးတွေမှာလည်း သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက် တဲ့စည်းကမ်းတွေဆိုတာရှိကြပါတယ်။ မိသားစုဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ကိုယ်စောင့်ထိန်းရမည့် စည်းကမ်း(သီလ)ကို မစောင့်ထိန်းတော့ဘူး ဆိုပါလျှင် ၎င်းမိသားစုသည် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။
ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီဆိုပါက သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းနှင့် ထင်ရာစိုင်းကြပေ တော့မည်။ တစ်အိမ်ထဲနေပြီး မျက်နာခြင်းဆိုင်နေရပေမယ့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုမိသားစုသည် မည်ကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်နိုင်ပါတော့မည်နည်း။ ဤသို့ဖြစ်နေရသည်မှာ စည်းကမ်းတို့ကို မလိုက်နာသည်ကလွဲ၍ တစ်ခြားရှိနိုင်ပါအုံးတော့မည်လား။ စည်းကမ်း (သီလ) လိုက်နာရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို လူသားအားလုံးက လက်ခံနိုင်တဲ့အထိ ပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့လိုပါသည်။
လူသားတို့သည် ဘာသာတရားတို့အား မကိုးကွယ် မယုံကြည်ကာမျှဖြင့် လောကကြီး ဘာမှဖြစ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် လူသားစည်းကမ်း (၀ါ) လူသားသီလကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြပြီဆိုလျှင်တော့ ဘယ်လိုနည်း နှင့်မှ ငြိမ်းချမ်း၍ မရနိုင်တော့ပေ။ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သော မည်သည့် အစု အဖွဲ့မဆို လူသားတို့၏ ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံကြရမည်သာ။ မိမိတို့၏အဖွဲ့ မိမိတို့ ဘာသာကို လူသားတို့ လိုက်နာကျင့်သုံစေလိုပါလျှင် မိမိတို့အဖွဲ့ အစည်း၏ စည်းကမ်း(၀ါ)သီလတို့ကို ဦးစွာ လိုက်နာမိဖို့ လိုပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်များသည် ဗုဒ္ဓသာသနာကို ထွန်းလင်းတောက် ပစေလိုကြသည်ကို ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာကြိုဆိုပါ၏။ သို့သော် မိမိတို့လိုက် နာရမည့် စည်းကမ်း သို့မဟုတ် ၀ိနည်းတို့ကို လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကိုကား မေ့ နေကြဟန်တူပါသည်။ ပါးစပ်ထဲရနေတာကိုမဆိုလို။ သံကိုသံဖျက် သံချေး တက်ဟူသော စကားကို ကြားဖူးကြလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။ဤစကားသည် လူသားတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိ၍ အမြုတေကျသော ချေဖျက်၍ မရသော စကား ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းပါတယ်။လောကကောင်ကျိူး၊လောကကြီးအေးချမ်းသာယာဖို့ကို ဘာသာတရားမပါပဲ(လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်စိတ် ရှိလာအောင် ကြောက်တရား၊အကျိူးတရားတစ်ခုခုမပါပဲ) လူသားသန်း ၆၀၀၀ မှ လူ ၁သန်းအား koyo ဟောပြောစည်းရုံးကြည့် စေခြင်ပါသည်။
ဘာသာတရားဟာ အားကိုးပြု ရာလို့ ဆိုလိုပါသလား?
သီလနှင့် စည်းကမ်း ကို အတူတူ ဟု ယူဆသတ်မှတ်ထားပါသလား?
ဘာသာတရားသည် လူတို့စောင့်ထိမ်းအပ်သော စည်းကမ်းကို သတ်မှတ်ပေးသည်ဟုယူဆပါသလား?
ဘဟာအီသာသနာဝင်တို့ မိမိတို့ထုတ်သောစည်းကမ်းကို စောင့်ထိမ်းခြင်းဖြင့် လူသားငြိမ်းချမ်းရေးကို ရမည် ဟုလက်ခံယုံကြည်ပါသလော?
စည်းကမ်းကို လိုက်နာစောင့်ထိမ်း ယုံဖြင့် အရာရာအေးချမ်းသာယာမည်ဟုယုံကြည်ပါသလား?
သို့ဆိုလျှင် ထိုစည်းကမ်းချက်တို့သည် အေးချမ်းသာယာမှု တို့ကိုရရှိစေရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု လက်ခံထားပါသလား?
ထိုစည်းကမ်းတို့ကို မည်သူက သတ်မှတ် ပေးပါသလဲ?
ထိုသူ သတ်မှတ်ပေးသော စည်းကမ်းချက်များကို အမှန်များ ဟု သင် လက်ခံ နိုင်ပါသလား?
သို့ဆိုလျှင် ထိုသူကို သင် မည်သို့ သတ်မှတ် ဆက်ဆံ ပါမည်နည်း?
“မိမိတို့၏အဖွဲ့ မိမိတို့ ဘာသာကို လူသားတို့ လိုက်နာကျင့်သုံစေလိုပါလျှင် မိမိတို့အဖွဲ့ အစည်း၏ စည်းကမ်း(၀ါ)သီလတို့ကို ဦးစွာ လိုက်နာမိဖို့ လိုပါတယ်။”
“လူသားတို့သည် ဘာသာတရားတို့အား မကိုးကွယ် မယုံကြည်ကာမျှဖြင့် လောကကြီး ဘာမှဖြစ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် လူသားစည်းကမ်း (၀ါ) လူသားသီလကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြပြီဆိုလျှင်တော့ ဘယ်လိုနည်း နှင့်မှ ငြိမ်းချမ်း၍ မရနိုင်တော့ပေ။”
အသင်လူသား……သို့ဖြစ်ပါက အသင် လိုက်နာ လက်ခံနိုင်သော မှန်ကန်သော လူ့စည်းကမ်း များကို မည်သူ က သတ်မှတ် ဖေါ်ပြပေးပါမည်နည်း?
သင်သည် မိမိကိုယ်ကို ဘာသာမဲ့ ဟု သတ်မှတ်ပါက ၄င်းစည်းကမ်းများကို မိမိဘာသာ ချမှတ် ကျင့်သုံး လိုက်နာ နိုင်ပါပြီလား?
အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင် ချမှတ်ကျင့်သုံးနေသော ဤစည်းကမ်းများကို လူမည်မျှက မှန်ကန်ပါသည်ဟု လက်ခံပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးပါသနည်း?
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့်ရှာဖွေ တွေ့ရှိသော အမှီကင်းမဲ့သော စည်းကမ်းများဖြစ်ပါ၏လော?
ွှ့အဖြေများသည် သင့်အတွက် အကျိုးဖြစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သီလဆိုတာ စောင်းထိန်း ဆောက်တည်ခြင်းပါ
ဘာသာတိုင်းမှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေရှိကြတယ်
ဘာသာဝင်တိုင်း အတတ်နိင်ဆုံး လိုက်နာရတယ် စောင်.ထိန်းရတယ်
ဘာသာမဲ.တဲ.လူအတွက် စည်းကမ်းမလိုပါဘူး ကိုကြိုက်တဲ. ဟာ ကိုလုပ်ဘဲ
ကမ္ဘာကြီးဟာ အလုံးကြီးလို့ စပြောခဲ့တာ တစ်ယောက်ထဲကပါ။ အသက်ကိုတောင်ပေးပြီး ပြောသွားတာပါ။ အခုတော့ သူ့ကျေးဇူးနဲ့ lusoegyikoko ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီနော်။ နေရာတိုင်းမှာ အကြောင်းတရား အကျိုးတရားကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ လူသား သန်း(၆၀၀၀)ထဲမှာ ကမ္ဘာ အလုံးဆိုတာကို လက်မခံသေးသူတွေ
ရှိနေလေသေးရဲ့။ လူတွေ စကားပြောကြတယ်ဆိုတာ ဖြစ်စေချင်တာတစ်ခုခုကို ဖြစ်စေဖို့အတွက် ပြောဆိုကြ တာပါ။ ပြောဆိုစကားရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ့်အသိထဲမှာ ပုံပေါ်လာတဲ့အထိ ဆက်စပ်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုရိုးပြောနေတဲ့စကားတွေဟာ ကိုရိုးကို အသိအမှတ်ပြုစေချင်လို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူ့လောကကို ကြည့်မြင်တဲ့အခါမှာ တစ်စုံတစ်ရာ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်။
သမုတိသစ္စာ (အချိန်) ပစ္စုပ္ပါန်ကို အတည်ယူ တကယ်ရှိသည်ကို ယူက –
အတိတ်အချိန် ဆိုတာ ရှိသည်။
အနာဂတ်အချိန် ဆိုတာ ရှိသည်။
True Answer က ဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ။ သမုတိသစ္စာကို အချိန်လို့ ပြောချင်တာပါလား။အချိန်နဲ့ သမုတိ
သစ္စာနဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး။ မိနစ်၊စက္ကန့်၊နာရီ၊နေ့၊ညတွေကိုသာ အချိန်လို့ပြောရမှာပါ။ သမုတိသစ္စာဆို
တာ အဲဒီ မိနစ်၊စက္ကန့်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။